Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 3
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 3
Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 3
Muzvidzidzo zvadarika Takatarisa kuti bhuku raIsaya kubva paChaputa 40 rinoda kufanana sei nemabhuku eTestamente Itsva.
MaBhuku manomwe tisati tasvika pana vaHeberu anotsanangura nguva dzemakereke manomwe. Izvi zvinotanga neBhuku ravaEfeso rinomiririra nguva yekereke yekutanga. Bhuku rechinomwe ndiFirimoni rinotsanangura muranda akapunyuka akabva adzidza dzidziso yemupositora Pauro. Saka munguva yechinomwe, vanhu vanofanira kupunyuka mumwe nemumwe kubva mudzidziso dzeKereke yeRaodikia vodzokera kudzidziso dzaPauro nevamwe vapositora.
Nguva yechinomwe inopera neKuuya kwaIshe Jesu kuzotora kereke yake yechokwadi. Ipapo mamwe maKristu ese akaponeswa nevanhu vemunyika vanobva vapinda munguva yeKutambudzika kukuru Evangeri robva radzokera kumaJuda.
Saka Bhuku rinotevera imwadhi kuvaHeberu.
Chiratidzo chikuru chenguva yedu ndechekuti Mwari akatendera maJuda kudzokera mumusha mavo kunorindira Messiah.
Bhuku 58: VaHeberu
Mumashure meNguva dzeMakereke, Evhangeri rinodzokera kumaJuda.
ISAYA 58:1 Danidzira kwazvo, usarega, danidzira nenzwi rako sehwamanda, uparidzire vanhu vangu kudarika kwavo, neimba yaJakobo zvivi zvavo.
Maporofita maviri, Mosesi naEria, vachaunza maJuda kuti agamuchire Jesu mukati menguva yeKutambudzika, kuti zvivi zvavo nekutadza kwavo pavakaroverera Jesu zviregererwe kwavari.
ISAYA 58:12 Vachaberekwa newe vachavakazve matongo akare; uchamutsa nheyo dzemarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa, mugadziri wopakakoromoka, muvandudzi wenzira, kuti vanhu vagone kugarapo.
Mukati menguva yekutambudzika kukuru maJuda achadzoserwa kunaMesiah wavo apo makore 2000 aive avaparadzanisa kubva pavakaramba Jesu, achagadziriswa nekupera kwekutambudzika kukuru. MaJuda achavakawo kubva panheyo dzeTestamente Itsva dzakaitwa nevapositora, nheyo dzinova mavambo ekutenda kwevaKristu mukati memazera akawanda enguva nomwe dzemakereke. Nzira dzekururama dzinoteverwa nemaKristu kubva muTestamente Itsva dzichararamwawo nemaJuda pavanodzoka kunaMesiah.
ISAYA 58:14 Ipapo uchafarira JEHOVA kwazvo; neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira dzenyika ndichakugutisa nenhaka yababa vako Jakobo, nokuti muromo waJEHOVA vakataura izvozvo
Pakupedzisira kwenguva yekutambudzika maJuda achafamba pamusoro sezvo vachazotonga nyika. Marudzi gumi nemaviri aIsraeri (rinova zita redzinza raJacobo), akatumidzwa kubva pavanakomana vaJakobo gumi navaviri, achabva azogamuchira mubairo wawo.
ISAYA 44:5 … Nokutora zita raIsraeri.
Panotevera kunouya maBhuku matatu anotibayira zani kuti tingararame sei:
Jakobo Petro naJohane
Vapositora vatatu vakaenda mugomo Jesu akabwinya vakaona zviitiko zvenguva yeKudzoka kwaIshe. Mosesi aimiririra kumuka kwevatsvene vakafa. Eria aimiririra vatsvene vachiri vapenyu vachakwira kudenga.
Zvino mapositora matatu aya anotiyambira kuti tingagadzirira sei kuuya kwaShe Jesu chaiko.
Nekuda kwechivi, hatigoni kuona hurongwa hwaMwari zvakajeka sekuda kwedu. Saka tinoda zvinhu zvitatu:
Kutenda kunova nheyo dzedu dzatinovakira padziri.
Tariro inotipa chinangwa chekuenderera mberi.
Rudo (kubatsira) runova nzira inoshanda kutenda kwedu kuti tisvike pachinangwa chedu.
I VaKorinte 13:12 Nokuti zvino tinovona pachivoni-voni ...
I VaKorinte 13:13 Zvino kutenda netariro norudo, ...
VaGaratia 5:6 Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvirevi chinhu, asi kutenda kunobata norudo.
Hurongwa hwaMwari hwakadzama kwazvo kuti tihunzwisise - zviri mahuri zvakaomarara. Tinozviwana tichidzungaira munyika yakaoma. Tiri kufa here kana kubarwa? Dutu remhepo isingazivikanwe kusaziva kunotiita kuti tinzwe zviri nani sezvo tinobva tatanga kutsvaga chirevo chazvo zvese.
Mabhuku matatu anotevera anoda kuti tironge nenzira inoshanda.
Bhuku rekutanga raJakobo rinosimbirira pakutenda.
Bhuku rechipiri Petro rinosimbirira patariro.
Bhuku rechitatu raJohane rinosimbirira parudo.
I VaKorinte 13:13 Zvino kutenda netariro, nerudo, zvitatu izvi, ndizvo zvinogara; asi chikuru pakati pazvo ndirwo rudo.
Rudo zvinoreva kudanana. Rudo runoenda kune avo vakaremerwa, usingatarisiri chero muripo.
Chinhu chikuru ndiro rudo hama kudanana (kwete tariro yemubayiro kana kutya kurangwa). Ndicho chikonzero nei maBhuku matatu achitaura pamusoro perudo.
Bhuku 59: Jakobo
KUTENDA. Jakobo haakurudziri kutenda kwezvinyorwa pane zvatinoziva pamusoro peBhaibheri (kunyagwe zvakanaka) asi kutenda kukuru kunozviratidza nenzira dzemabasa akanaka anoonekwa. Mabasa akanaka aya haasi ekungobatsira vamwe vanoda rubatsiro, asi kuitawo muenzaniso nekuvaratidza nzira yakanaka mukupfeka, hunhu uye chitendero.
Zvatinoziva mupfungwa dzedu (chisimbiso chiri muhuma dzedu) chinofanirwa kuburitsa mabasa ari muBhaibheri anoshanda (chisimbiso mumaoko medu). Tiri kurarama munguva apo nyika iri kuenda muchiratidzo chechikara muhuma dzevazhinji, kunova kusukurudzwa njere kuti vanhu vatende zvisiri muMagwaro zviri tsika dzemasangano. Pfungwa idzi dzinobva dzatipa chiratidzo mumavoko edu, apo tinotanga kubatira tsika dzevanhu dzekereke yatinoenda.
Pano pane mienzaniso yemabasa ekutadza ari kuitwa nemakereke nhasi uno.
Tinotora chirayiro mangwanani asi Jesu akazviita husiku.
Tinorega kugezesana tsoka sezvazvakaitwa naJesu mumashure mechirayiro zvichireva kuti hakunei nekubvisa tsvina kubva patsoka dzavo pavakapinda mumba. Jesu akaudza Petro kuti haangazvinzwisise uye kuti zvaiitirwei, saka kuita uku kwaive kusingaratidziri kuzvideredza sezvo Petro ainzwisisa nyaya yekuzvideredza.
Tinobhabhatidza vana vacheche uye tichibhabhatidza muzvinzvimbo zvaBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene pachinzvimbo chemuzita raJesu.
Tinotsanangura Mwari nenzira yezvinzvimbo zvitatu izvi saka hatisisina zita rimwechete rekudaidza Mwari wedu.
Tinoshongedza dzimba dzedu nemuti weKisimusi, topemberera zuva rekuberekwa kwamwari wechipegani wezuva musi wa 25 Zvita, topanana zvipo paKisimusi asi iyi yaive tsika yeRoma yechipegani.
Tinoviga maisita egi, kuita ruzha musi wegoredzva uye kutendera mufundisi kuti atitonge mukereke.
Tinodaidza maprista kuti “baba”, tinoita chiratidzo chemuchinjikwa, kusvuta, kunwa, kutamba njuga, kupfeka nguvo dzisina kudzikama uye dzisina kufanira, tinorambana nekuroranazve.
Tinoisa mureza pamusoro pechivakwa chekereke toisa mufananidzo wejongwe pamusoro pawo, nezvimwe zvakadaro (jongwe muZvinyorwa zveBhaibheri ndiro rakava mufananidzo wakayeuchidza Petro kuti akaramba Ishe Jesu katatu. Saka jongwe iri riri kutaura kuti kudii pamusoro pekereke yedu?)
Kana kupfurikidza mabasa edu tikaita chero dzimwe dzetsika dzisimo mumagwaro idzi, zvinenge zvichiratidza kuti pane chisina kuita zvakanaka nekutenda kwedu. Kana tichitevera zvakanyorwa muBhaibheri zvizere pane zvatinotenda, tichaita zvinhu izvi.
Jakobo 2:17 Saizvozvo vo, nokutenda kana kusina mabasa, kwakafa hako.
22 … vuye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namabasa.
ISAYA 59:2 Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu, zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake, kuti arege kunzwa.
Kutadza nebwoni kuziva kuti chinhu chakaipa asi moramba muchichiita. Jakobo haadi kuti titende muna Mwari asi tobva takanganisa nekuda kwemabasa edu munzira dzatinobatira Mwari nadzo. Kuita kwakarasika uku kunouraya kutenda kwedu.
ISAYA 59:3 Nokuti mavoko enyu akasvibiswa neropa, neminwe yenyu nezvakaipa; miromo yenyu yakareva nhema, rurimi rwenyu runon'un'una zvakashata.
Kana, semaKristu akadzikinurwa, mabasa edu akaipa, uye kana zvatinotaura zvisingaenderane neMagwaro, uye zvakashata sezvo dzinenge dziri nhema, ipapo tinenge tiri munzira isiriiyo uye tinozoswatanudzwa munguva yeKutambudzika kukuru.
ISAYA 59:6 Matandira (kunyengera) avo haangaiti nguvo, havangafuki zvavakaita; mabasa avo mabasa ezvakaipa;
Kutevera tsika dzekereke kunotiita kuti tiite zvinhu zvizhinji zvisiri muBhaibheri. Makristu akatapwa mumasangano emakereke avanoenda zvekuti vanotya kusimuka vachimira nezvakanyorwa muBhaibheri. Saka vanosarudza kubatirira patsika dzavakadzidziswa. Tsika idzi hadzisi kuzovadzikinura kubva panguva yeKutambudzika kukuru. Kutadza nebwoni zvinoreva kuti vanoziva kuti zvakaipa asi nekuti vamwe vese vari kuzviita, saka naivowo vanozviitawo.
ISAYA 59:9 Naizvozvo kururamisirwa kuri kure nesu, nokururama hakusvikiri kwatiri; tinotsvaka chiedza, asi tarirai, rima bedzi, tinotsvaka kubwinya asi tinofamba pakasviba.
Hatitonge nyaya nezvakanyorwa muBhaibheri. Kuenda kukereke kunofanira kutinatsa. Asi maKristu anoramba asina zivo nezvinhu zviri muMagwaro zvizhinji. Saka tinopedza nguva yedu zhinji tichifamba murima. Zvinofanira kuva nenzira iyi nekuti Jesu ndiye Chiedza, uye akamira kunze kwekereke sezvakataurwa kuna Zvakazarurwa Chaputa 3.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia uti;
20 Tarirai, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda kwaari ndicharayira naye, naiye neni.
Kana chiedza chiri panze, mukati munenge muine rima nekuti rima rinokonzereswa nekusavapo kwechiedza. Saka zvakanyorwa muBhaibheri zvizhinji zvinobva zvaramba zvisingazivikanwe. Mwari haana kubvira audza Eva kuti atendeuke. Nei? Mwari akatsanangura kunyoka nekunaAdamu zvavaive vatadza paakati “Nekuti maka....”. asi Mwari haana kubvira audza Eva zvaaive atadza nei? Mateo naMako vakataura pamusoro pevatumwa pabwiro paJesu. Ruka naJohane vakati paive nevatumwa vaviri. Vari kuedza kutiudza kutii? Zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekutii? Zita raMwari nderekutii? Saka maKristu nhasi vari kufamba mukusaziva. Tine zvatinoziva asi tinohwandwa nezvimwe zvinhu muBhaibheri.
Chikonzero ndechekuti vamwe vaparidzi ivo pachavo havatonzwisisi zvimwe zviyorwa zvemuBhaibheri. Bvunza muparidzi kuti nei Jesu akanyora kaviri muvhu nechigunwe chake paakabvunzwa pamusoro pemukadzi aive chifeve, ipapo munoona kuti vanonzvenga nzvenga sei kuti vadarike nekusapindura mubvunzo uyu. Vanenge vasingazivi mhinduro, asi vasingakwanisi kubvuma kusaziva kwavo. Havadi kubvuma kuti chiitiko ichi chakakosha, saka vanoruramisira kusaziva kwavo nekurerutsa chiitiko ichi. Nei vasingazivi kuti Gwaro iri rinorevei? Nekuti Shoko rakamira kunze kwekereke yavo.
Bhuku 60: Petro wekutanga.
2. TARIRO. Mwadhi iyi inosimbirira patariro. Tariro ndicho chinangwa chekutenda, asi zvinoda kutenda kuti tisangane netariro dzedu.
1 Petro 1:3 … wakatibereka zve nengoni dzake huru kuti tive netariro mhenyu inovuya nokumuka kwaJesu Kristu kuvakafa.
I Petro anosimbisa kuti Kuuya kwaJesu Kwekutanga kunoratidza kuti anokwanisa kumutsa vakafa.
Kuti Jesu akamuka kuvakafa kunotigonesa kuti tive netariro huru kunguva inouya.
Kunyangwe tichizofa, tinoziva kuti Jesu anogona kutimutsa kubva kuvakafa. Akaratidza simba rake iri paakazvimutsa iye kuvakafa.
ISAYA 60:1 Simuka, uvheneke; nokuti chiedza chako chasvika, kubwinya kwaJEHOVA kwabuda pamusoro pako.
Jesu paakamuka kubva kuvakafa ipapo Chiedza cheEvangeri chakavhenekera. “Wamuka” ndiro Evangeri. Munhu Jesu akakunda rufu, saka chero mumwe munhu wese anotenda maari anokwanisa kuva netariro huru yekuti anokwanisa kumuka kubva kuvakafa rimwe zuva.
ISAYA 60:2 Nokuti tarira rima richafukidza nyika, nerima guru marudzi avanhu asi JEHOVA achabuda pamusoro pako, kubwinya kwake kuchavonekwa pamusoro pako.
Isaya akaporofita kuti mukati menyika ine rima nezvivi, “JEHOVA achamuka” kubva kuvakafa. Jesu ndiye munhu wekutanga kukunda rufu akadzoka ari mumuviri usingafuki kuvora usingazofi zvakare.
ISAYA 60:3 Marudzi achauya kuchiedza chako namadzimambo kukubwinya kwakakubudira.
Kumuka kwaJesu kubva kuvakafa. Ichi ndicho chinova chiedza chakajekesesa kumarudzi . Nekuziva kuti tinogona kumuka kuvakafa ndiyo tariro yakanakisa kana takatarisana nekurwadziwa nekutyisa kwerufu.
Bhuku 61: Petro wechipiri.
Petro wekutanga anotiyeuchidza kuti Jesu, pakuuya kwake kwekutanga, akaratidza simba rake rekumutsa vakafa.
Petro wechipiri anosimbisa pamusoro pepaachamutsa vakafa. Izvi zvichave paKuuya kwake kweChipiri.
Tariro yedu huru inouya ndiko kuuya kwaShe sezvo izvi zvichave paachatimutsa kubva kuvakafa.
Muvengi wedu mukuru ndiye rufu. Rufu rungatikunde muhupenyu hwatiri nhasi. Asi rumuko ndiyo tariro huru kwazvo inouya sezvo rumuko ruchabvisa rufu.
II Petro 3:10 Asi zuva raShe richauya sembavha
ISAYA 61:2 Kuti ndiparidze gore rengoni dzaJEHOVA, (Kuuya kwake kwekutanga paakaratidza kuti anokwanisa kumutsa vakafa) nezuva rekutsiva raMwari wedu; (Kuuya Kwake kweChipiri paachamutsa vakafa)
Akatipa chinhu chekutarisira chakakura kutidarika chiri kunze kwehupenyu hwedu nemiganhu yedu.
II Petro 3:12 Imi munotarira nokushuva vo kwazvo kuvuya kwezuva raMwari
Kuuya kwaShe kuzowanana neMukadzi wake kunotisimudzira patariro yezvichauya.
ISAYA 61:10 Ndichafarira JEHOVA kwazvo mweya wangu uchava nomufaro muna Mwari wangu; nokuti wakandifukidza nguvo dzoruponeso, wakandipfekedza chokufuka chokururama, sechikomba chinoshonga korona, vuye somwenga unozvishongedza novukomba bwake.
Jesu nemwenga wake vachagara nemufaro nekusingaperi sezvo vachatonga nekusingaperi.
II Petro 3:13 Asi sezvaakapikira, tinotarira denga idzva nenyika itsva, munogara kururama mazviri.
Tariro dzedu dzinoperera mudenga idzva nenyika itsva. Zvino topinda munguva isingagumi.
Bhuku 62: Johane wekutanga
3. Rudo: Pano kukosha kuri parudo nekudanana. Rudo ndiyo nzira apo kutenda kwedu kunoshanda kuitira kuti tisangane nechinangwa chetariro yedu.
ISAYA 62:5 Nokuti jaya sezvarinowana mhandara, saizvozvo vanakomana vako vachakuwana; vuye chikomba sezvachinofarira mwenga , saizvozvo Mwari wako uchakufarira.
Muchato ndicho chinhu chiri pachena uye chinoonekwa nemunhu wese chinopupura rudo.
I Johane 4:8 Nokuti Mwari rudo
I Johane 4:11 Vadikanwa, kana Mwari atida saizvozvo, nesuvo tinofanira kudana.
I Johane 5:3 Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirairo yake;
Kana zvichitiomera kuti titeerere Bhaibheri, zvinoreva kuti hatidi Mwari.
Bhuku 63: Johane wechipiri
II Johane 1:1 Mukuru kunamai vakasanangurwa navana vavo vandinoda nezvokwadi; ndisati ndiri ini ndoga, asi navose vo vanoziva zvokwadi. (mai vakasanangurwa vanomiririra kereke yechokwadi yakasarudzwa naMwari).
Rudo parizvino rwave kusimbiswa “parudo muchokwadi” . Zvakakosha kuti tide chokwadi-Shoko raMwari.
Tinofanira kuda Mwari (zviri nyore). Tinofanira kuda vanhu (hazvisi nyore). Tinofanira kuda Chokwadi (zvakaomarara).
II Johane 1:4 Ndinofara zvikuru nokuti ndakawana vamwe vana venyu vachifamba muzvokwadi
Hatigone kufamba muChokwadi kunze kwekunge tiine anotitungamirira. Isaya anotaura pamusoro paMosesi achitungamirira maJuda kuyambuka gungwa Dzvuku. Isaya akaporofita pamusoro peMweya waMwari unotiita kuti tive nezororo kubva kuzvivi nekusatenda nekugara matiri uchitidzora kupfurikidza rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene. Ipapo Mweya Mutsvene unenge uri matiri unobva wagona kutitungamiririra, wotiita kuti tide Chokwadi chake.
ISAYA 63:12 Uripiko iye wakafambisa ruvoko rwake runokudzwa parutivi paMosesi, wakaparadzanisa mvura zhinji pamberi pavo kuti azviwanire mukurumbira usingaperi?
ISAYA 63:13 Uripiko iye wakavafambisa napakadzika, sebhiza murenje, vakasagumburwa?
Mosesi akatungamirira maJuda kuenda nzvimbo dzakadzika-dzika.
Zvino Isaya akaporofita kuti Mwari achaita zvimwechete zvo kukereke Yake kana tikatevera kwatinotungamirirwa neMweya.
ISAYA 63:14 Mweya waJEHOVA wakavazorodza , semombe dzinoburukira kumupata; saizvozvo makafambisa vanhu venyu kuti muzviwanire mukurumbira mukuru-kuru.
Mwari anotungamirira maKristu kunyange pavanopinda mumupata wemumvuri werufu. Havangatye chinhu kunyangwe zvakaipa. Rufu muhupenyu huno runovhura Musuwo kuenda kuhupenyu huri nani Kudenga.
Mwari anotungamirira maKristu kugadzira zita Rake. Kwete kuti aite zita remaKristu.
Mwari anotarisira kuti maKristu aponeswe uye kuti vaite mabasa akanaka. Asi izvi zvingori zvinhu zvinofanira kuitwa. Zvinodiwa naMwari chaizvo kwatiri kuti tizive chokwadi kubva kuMagwaro, tova nechokwadi chekuti tiri kufamba muchokwadi- kwete mutsika dzekereke yedu.
Kana tisina chokwadi, kunamata kwedu hakurevi chinhu.
Bhuku 64: Johane Wechitatu.
Kuda Chokwadi kune dambudziko guru rimwechete: kunotiita kuti tione kuti vatungamiri vemakereke vari kutadza.
Zvino, tinoda Chokwadi zvakazara here zvekuti tinosimuka kuvakuru vemakereke nevafundisi, kunyangwe tikadzingwa mukereke imomo. Kana kuti tinogara “mumbiri”, toramba tiri chikamu chekutadza.
Johane akarumbidza Gayo nekufamba muchokwadi.
Asi kuziva chokwadi kunoita kuti munhu azive chakaipa.
Johane akawana nguva yekutaura chakaipa chimwechete.
Saka akaratidza chitadzo chikuru chenguva yekereke yekutanga: hutungamiri hwevanhu nemufundisi anotonga. Kuipa kwakashata kwaive kwapinda mukereke uku – mutungamiriri wekereke anotonga Diotrefe aive nerudo nechinzvimbo chake chepamusoro. Vafundisi vanozviti ndivo misoro yemakereke. Kana zita remufundisi richinzi Jimu, vanhu vanofanira kumudaidza kuti Mufundisi Jimu. Chizvimbo “mufundisi” (pastor) chinomupa kutonga. Humwe hushumiri hauzowani kuonekwa kwakadai. Asi izwi rekuti “mufudzi” (pasita) rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. MuBhaibheri, izwi rekuti “mufudzi” (pasita) harina kubvira rayananiswa nezita remunhu. Saka hakuna Magwaro anotsigira simba rehudzvanyiriri rinozvipa mapasita. Asi veMasangano vakatevedzera maCatholic, uye Pope weCatholic anotonga kereke yeCatholic semudzvanyiriri.
Mapositora akanyora Testamente Itsva kuti makereke ese adzidze asi saDiotrefe, nhasi vafundisi vanoramba Magwaro mazhinji anopesana nezvinotendwa mumasangano avo. Havadi kugamuchira Chokwadi.
Diotrefe akaramba mupositora Johane akanyora Magwaro. (Nhasi vafundisi vakawanda vanoramba Magwaro akawanda apo vanosimbirira kuturikira mazwi akataurwa nevanhu mukuita kwekunzwisisa kwavo nemafungiro avo). Semusoro wekereke akazvisarudza, Diotrefe akatora simba rekudzinga vanhu mukereke vaisawirirana nezvaaidzidzisa. Mufundisi ega ndiye ane simba rakaita seiri pamusoro pevanhu.
III Johane 1:9 Diotrefe, unoda kuva mukuru pakati pavo, unotiramba isu.
10 Naizvozvo kana ndichiuya ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti unotiitira makuhwa namashoko akaipa; uye haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.
ISAYA 64:6 Nokuti isu tose tave sounetsvina, kururama kwedu kwose kwafanana nenguvo ine tsvina; isu tose tinowoma seshizha, zvakaipa zvedu zvinotibvisa semhepo.
Isaya anotuka tose. Saka tese tiri munzira yakarasika. Saka vanhu vanotungamirira makereke edu, vanomanikidza masangano avo kuti atende zvavanofunga, havana kutungamirira kereke kunzira yechokwadi. Hutungamiriri hwevanhu huru kutora kereke kubva paShoko rakanyorwa nemapositora vachipinda nayo munguva yeKutambudzika kukuru.
Hunhu hwedu nemapfekero edu zviri kuwira pasi, nekuti chatinoti kururama hachina kusiyana nenguvo yakasviba yakabvaruka inoda kurashwa.
Kubva kumupositora Johane, dambudziko guru riri mukereke ndihwo hutungamiriri
Johane Mubhabhatidzi akatii pamusoro pevatungamiriri vechitendero chechiJuda vemazuva ake.
Mateo 3:7 Asi wakati achiona vazhinji vavaFarise navaSaduse vachivuya kuzobhabhatidzwa, akati kwavari: Vana venyoka, ndiyaniko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
Zvikurusei akataura kuti vatungamiriri vechitendero vaive vana venyoka vane huturu mumiromo yavo (nhema dzisiri muMagwaro dzavanoudza vanhu vachiti vari kuparidza chokwadi).
Saka vatungamiriri vechitendero vakagara vari vavengi vakuru vechokwadi, zvichitanga naNimrodi akatanga zvakavanzika zveBabironi.
ISAYA 64:7 Hakuna unodana zita renyu unozvimutsa kuti akunamatireyi; nokuti makativanzira chiso chenyu, mukatinyungurusa nezvakaipa zvedu.
Zita raMwari rakakanganikwa nekuti vakuru vemakereke vakaritsiva nemazita ezvinzvimbo Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Vanhu vatatu vakasiyana muhuMwari havagoni kuita Zita rimwechete ravo vose vari vatatu. Kunyanya nenyaya yekuti hakuna Zita rakapiwa Mweya Mutsvene muBhaibheri.
Mufundisi anoti ndiye musoro wekereke. Hakuna munhu anokwanisa kuita misoro miviri. Saka Jesu anobva aenda kunze kwekereke nokuti mufundisi ari mukereke. Nokuti ari kunze kwekereke, chiso chake chakavigwa kwatiri. Johane ataura izwi rekuti zvakaipa kaviri. Zvinoreva kuti tinoziva kuti tiri kukanganisa kana tikazvipira kuna mufundisi anotonga nekudzoreredza kereke. Tinoziva kuti tiri kurasika kana tichivaka kutenda kwedu pamazwi akataurwa nevanhu pachinzvimbo cheShoko raMwari rakanyorwa.
Bhuku 65: Judasi
Zvino tasvika paBhuku rechipiri kubva kune rekupedzisira, tisati tasvika pana Zvakazarurwa rinopedzisa Bhaibheri.
Pano Judasi anonzwa achimanikidzwa kutipa yambiro yekupedzisira pamusoro pengozi iripo pahutungamiriri hwekereke.
Judasi ndiyo tsamba yekupedzisira yakanyorerwa maKristu. Akavakira pakuvamba kwaJakobo, Petro naJohane murudo rwake rwekutipa gwara rekuti tingakunda sei kumagumo. Chii chatinofanira kusimbirira pachiri? Chinhu chinorwadza kutsamba yaJudasi ndechekuti haana kugona kuwoneka nenzira ine mufaro kana kubhabhadzirana asi akamanikidzwa kutaura pamusoro pekuipa kukuru kuri kuvoresa nekurasisa makereke.
Dambudziko guru rine kereke ndivo vanhu vanotungamiririra kereke.
Kushata kwehutungamiriri hwevanhu muTestamente Itsva kwakangofanana nezvakwaive muTestamente Yekare. Maitiro evanhu haashanduki. Rudo rwesimba mune zvechitendero pamusoro pevanhu ndirwo runon'oresa hutungamiri. Kuna Zvakazarurwa, Johane anoona mukadzi (kereke) akatasva bhiza achitonga pamusoro pesimba remadhimoni. Kereke inotasva kuenda pakuva nesimba pamusoro pemweya wakaipa uyu. Saka izvi zvinotiudza kutii pamusoro pevatungamiriri vemakereke?
ISAYA 65:1 Ndakatendera kuti nditsvakwe navasina kundibvunza, ndakatendera kuti ndiwanikwe navasina kunditsvaka,
Hutungamiriri hwemakereke hwabvisa maKristu paBhaibheri. Tinoponeswa, tobva tatizira mutsika dzemakereke pachinzvimbo chekutevera Magwaro. Saka Mwari vanobva vamanikidza vakarashwa, vasiri chikamu chekereke, kuti vatende mugadziriro dzake dzemutambo wemuchato. Jesu akambodzidzisa kuti mambo akambokoka vanhu kumuchato vese vakaramba. Akaudza varanda vake kuti vauye nevakarashwa vaisadiwa. MaKristu akaponeswa vanoda “chichechichechi” (churchianity zvichireva kuti chero taungana tanamata asi vanhu vachitevera zvido zvevanhu vasingakoshesi zvakanyorwa muBhaibheri nemazvo), kwete Bhaibheri rinotsanangura hurongwa hwegadziriro yemuchato. Saka Mwari achazviwanira vamwe vanhu venhando-nhando kuti vatende kuBhaibheri rake, ivavo ndivo vachapinda muchirayiro chemuchato neGwaiana. MaKristu akaponeswa mumakereke ndivo vachapinda munguva yeKutambudzika kukuru kwavachanokohwa zvibereko zvemafungiro evanhu nemazano evanhu.
ISAYA 65:2 Ndakatambanudzira mavoko angu zuva rose kurudzi rwevanhu rwakandimukira, vanofamba nenzira isakanaka, vachitevera ndangariro dzavo.
MaKristu anoda mazano netsika dzevanhu. Vanoita nhomba yezvenyika. Vakazadzwa nedzidziso dzemasangano avo. Vanosarudza kereke pana Kristu.
Judasi 1:18 Kuti vakakuvudzai kuti nenguva yokupedzisira vaseki vachava'ko, vanofamba nokuchiva kwavo vasingadi Mwari.
Hwaro hunoramba huchidzikira nekufamba kwenguva. Sezvazvaive mazuva eSodoma, saka zvichave zvakadaro pamazuva eKuuya kwaShe.
ISAYA 65:3 Vanhu vanogara vachinditambudza pachena;
Takasimudzira “chichechichechi” kuti kuzviunganidzira pfuma tichinamata, uye kupfeka zvisina kudzikama kunotenderwa nekuti vakadzi vanoda mapfekero evemunyika. Tinomiririra tsika dzekereke dzakaipa, zvakadaro tobva tamhura avo vanoda kutevera Magwaro, zvakatoipisisa. Kumhura vatendi vechokwadi veBhaibheri kumhura Mwari.
Judasi 1:23 Muchivenga kunyangwe nenguvo yakasvibiswa nenyama.
Vakadzi vechiKristu vaimbopfeka nguvo refu. Muna 1963 marokwe mapfupi akapinda. Izvi zvakabva zvatora nyika, asi vakadzi vechiKristu vakazvipikisa. Zvino vakadzi vechiKristu vakazotanga kutambira marokwe mapfupi aya, pakupedzisira vakadzi vechiKristu vakatanga kupikisa nekutuka vakadzi vanopfeka zvakanaka vakaramba vachipfeka nguvo refu.
Zvimwechete neshangu dzakakwirira. Zvakatangira munyika zvikapindira mukereke.
Mepu yeItaly yakafanana nebhutsu yegogo yakakwirira.
Mukadzi anopfeka bhutsu dzegogo dzakakwirira anenge achiratidzira kurudziro ine Roma pamusoro pake nekereke yake. Tarisai mukadzi wekuMasangano ari mukereke musi weSvondo. Majini eruvara rwebhuru nemagogo. Ndiwo mufananidzo chaiwo weRoma. Rangarirai, mukadzi anomiririra kereke. Kana Roma iri chikara, zvino mufananidzo wechikara uri kukurira pakati peveMasangano.
Asi ngwarirai. Sicily chitsuwa uye yakaita kunge mufananidzo wedombo rakaonekwa naDanieri richitema mufananidzo wemuHedeni patsoka.
Tarisai kusimuka kwakaita kumashure kwebhutsu yegogo iri majombo. Mutasvi wemabhiza anopfeka majombo. Izvi ndizvo zvakaziviswa naZvakazarurwa chaputa 6 achizivisa antikristu, semutasvi wemabhiza.
ISAYA 65:5 Vanoti: Mira woga, usaswedera kwandiri, nokuti ndiri mutsvene kupfuvura iwe.
ChiKristu chemakwikwi. Sangano rega rega rinofunga kuti riri nani pane rimwe. Saka maKristu anonzwa akachengetedzeka kana aine sangano ravanoti vanobva kwariri nekuti vanobva vanzwa vasingadi chiro vakazadziswa. Sezvo vakaponeswa, vakangomirira Kuuya kwaShe. Saka havagamuchiri kugadziriswa nevanhu vari kunze kwesangano ravo.
Judasi 1:19 Ndivo vanoparadzanisa, ndovenyama, vasinoMweya.
Venyama zvinoreva kuti vanokurirwa nendangariro dzavo. Zvavanofunga zvakanaka uye zvinovaitira ivo, zvakafanana nekuzvishongedza kumeso nekuzvinyora, mapfekero asina kudzikama, vakadzi vanogera misoro yavo, nekuita mimhanzi yemangoma pakurumbidza Mwari. Bhaibheri harina kubvira rataura nezvengoma. Asi kubva pakatanga mimhanzi yemangoma mumakore ana 1950 kudzidzisa vechidiki kukakavara, mimhanzi iyi yakabva yapinda nekuzara mumakereke, sezvo makereke ari kuramba achitevera zviri munyika. Sangano rega rega rinoda kuti vanhu varo vagare vachifara musangano. Mimhanzi yedhisiko, nezita raJesu, inoita kuti vanhu vagare vachifara. Vanhu vanotamba nekusimudza maoko avo mudenga mumhanzi uchiridzwa mukereke, sezvazvinongoitwa kumadhisiko. Vanomirawo panomira mimhanzi. Iyi inzira yekutamba yekumafaro.
Vanhu vanoungana munzvimbo dzakasarudzwa dzakavakwa dzinonzi machechi. Unokwanisa chete kukwanamo kana uchiita hunhu hwakafanana nehwavo.
ISAIAH 65:7 Zvakaipa zvenyu, nezvakaipa zvemadzibaba enyu pamwechete, ndizvo zvinotaura Jehova,
Tinodzidza hunhu hwakaipa kubva kuzera rinenge radarika netsika dzavo. Vatungamiri vedu vanotiita kuti titevedzere hunhu hwemaJuda vakapunyuka kuEgipita (zvichiratidza kuponeswa) asi vakazofa murenje nekuti havana kutenda Shoko raMwari resungano. Mumashure mekuponeswa tinoshaiwa hanya uye tinoshaiwa Magwaro mukutenda kwedu. Kora naDatani ndivo vatungamiri vakatungamirira maJuda mazhinji kurufu murenje. Vatungamiriri vezvechitendero nguva dzese. Ndipo parere dambudziko rese.
Judasi akataura vamwe vatungamiriri vane hunhu huri kutevedzerwa nevamwe vatungamiri vemakereke vanhasi. MaKristu anotevedzera mienzaniso ine zvivi yeguta reSodoma neGomora naKaini akaramba chokwadi.
Juda anotiyambira pamusoro pekutevera vatungamiri vemakereke vakaita saKora (Korah) akarwisa Shoko raMwari nekupikisa Mosesi aive muporofita waMwari, naBaramu, muparidzi aikoshesa kuwana mari, aive akangoita saJudasi Iscarioti.
ISAYA 65:11 Asi imi munosiya JEHOVA (Shoko rakanyorwa), nokukanganwa gomo rangu dzvene, imi munogadzirira Gadi tafura, (vatungamiriri vemakereke vanonyengerwa nehuwandu votevera kune ruzhinji) nokudirira mweni waini yakavenganiswa (tinoita chirayiro, pasina kugezesana tsoka, mangwanani nekuti vanhu vese vanoona iri nguva inovaitira. Jesu akazivisa chirayiro nguva yehusiku zvese nekugezwa kwetsoka, asi izvi zvinhu zvinorema kwazvo kwatiri, uye tinoda kuita kuti nhengo dzekereke yedu dzigare dzakasununguka)
ISAYA 65:12 Ndichakutemerai muvurawe nomunondo, imi mose muchakotamira pakubaiwa; nokuti panguva yandakadana, hamuna kupindura; panguva yandakataura, hamuna-kunzwa; asi makaita zvakaipa pamberi pangu , mukasanangura zvandakanga ndisingafariri.
Nhengo dzekereke dzemusangano, kunyangwe vakaponeswa kubva kugehena, vachiri kuenda kunguva yeKutambudzika kukuru nekuti Jesu akamira pamukova kunze kwekereke, uye hatisi kuteerera Shoko rake. MaKristu ese asinganamate mufananidzo wechikara munguva yeKutambudzika vachauraiwa.
Zvakazarurwa 13:15 Chichapiwa simba rekupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chiraire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vavurawe.
ISAIAH 65:15 Imi muchasiira vasanangurwa vangu zita renyu, rive rekutuka naro; Ishe JEHOVA uchakuvuraya ndokutumidza varanda vake rimwe zita:
Mazita emasangano atinodaidzwa nawo kutukwa. Tinozvidaidza kuti maCatholic, maLutheran, maBaptist nemamwewo akadaro.
Tinofanira kungodaidzwa kuti maKristu.
Tarasikirwawo nezita raMwari patinotora mazita matatu ezvinzvimbo. Zita raBaba, reMwanakomana nero Mweya Mutsvene harisi zita.
Hatichabhabhatidzi muzita raJesu Kristu sezvakaitwa nevapositora.
Jude 1:25 Kuna Mwari iye mumwe, muponesi wedu naJesu Kristu, Ishe wedu, ngakuve kubwinya, novumambo, nesimba, novushe, nguva isati yavapo, nazvino, nokusingaperi. Amen.
Mwari achatonga munguva inouya, zvese muMereniyamu, nemuDenga idzva nenyika itsva.
ISAYA 65:17 Nokuti tarirai, ndinosika denga idzva nenyika itsva; zvinhu zvakare hazvingarangarirwi, kana kufungwa mumoyo.
Saka pamagumo Mwari achaita chimwe chimiro chiri nani kwatiri.
ISAYA 65:18 Asi imi farai mufarisise nokusingaperi pamusoro pezvandinosika; nokuti tarirai, ndinosika Jerusarema rive guta romufaro, navanhu varo vave nomufaro.
Avo vanoda kutenda muchokwadi vanofanira kutora mapositora sevatungamiri vavo vechokwadi. Vatendi ava vacharambwa nevatungamiri vemakereke nekuda kwekutevera Magwaro, nekutaura kuti Zita raMwari ndiJesu Kristu. Asi vachawana mubairo wavo pakupedzisira. Tingarambwa parizvino, asi tichazofara ipapo.
“Ndinosika Jerusarema rive guta romufaro” zvinoreva kuti maJuda vachagamuchira Evhangeri pakupedzisira munguva yeKutambudzika kukuru.
ISAYA 65:20 Hapangazovipo rushiye runa mazuva mashoma kana mutana usino-kusvitsa mazuva ake; nokuti mwana uchafa apedza makore anezana; nomutadzi ucharobwa nokutukwa kana asvika makore ane zana.
Mukati menguva yeMereniyamu, maJuda anenge akunda munguva yekutambudzika kukuru nevahedheni vasina kubvira vanzwa Shoko vakakunda paAmagedhoni, vachararama zvakare makore 1 000, sezvazvaive mvura yaNoa isati yauya.
Isu tinorarama makore 70 toti mwana ndiye ane makore 7, chinova chikamu chimwe pazvikamu gumi chehupenyu. Saka mwana ane makore 100 anenge ararama chikamu chimwe pazvikamu gumi zvemakore 1 000. Asi chero munhu anozotadza anouraiwa munguva yeMereniyamu apo Jesu anotonga netsvimbo yedare. Mutadzi ane makore 100 anenge asina mukana wekuwana chikonzero chekutadza sezvo vanenge vakura zvekugona kuziva chakanaka nechakashata, zvisinei nekunge vararama chikamu chimwe pazvikamu gumi zvehupenyu.
ISAYA 65:25 Bere negwayana zvichafura pamwechete, shumba ichadya vuswa senzombe, vuye guruva richava zvokudya zvenyoka. Havangakuvadzi kana kuparadza pagomo rangu rose dzvene-ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Mereniyamu achava makore 1 000 akanakisa ane runyararo. Uku kungori kuratidzirwa kwehupenyu husingaperi.
Bhuku 66: Zvakazarurwa
Uyu ndiwo mufananidzo wekupedzisira, zvinosuwisa kuti zvakawanda zvinotaurwa nezvazvo kutadza nekuipa kuri mumakereke.
Saka kutadza kwanyanyisa mukereke pane zvatinofunga isu.
ISAYA 66:1 Zvanzi naJEHOVA, kudenga ndicho chigaro changu chovushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu; mungandivakira imba yakadiniko? Ndeipiko nzvimbo pandingazorora?
Nyika ingori chitsiko chetsoka. Tinofanira kuvimbika kuhumambo hwemweya hweShoko raMwari. Asi iripiko imba yaMwari sezvo tarambana neShoko rake kumakereke kwedu?
Mwari ave kutarisana nemunhu mumwe nemumwe parizvino. Kwete vapfumi vanozviratidza nekuzadziswa kwekuti havana chavangade.
ISAYA 66:2 … asi ndicharangarira munhu uyu, iye murombo unomweya wakaputsika, unodedera neShoko rangu.
ISAYA 66:3 Zvirokwazvo, vakazvisanangurira nzira dzavo, mweya wavo unofarira zvinonyangadza zvavo.
(Tiriniti, mamega chechi, mumhanzi wedhisiko, miti yeKisimusi, maisita egi, masangano, masangano evafundisi, vakuru vemakereke vanozvisanganisa mune zvematongerwo enyika zvakuita “maBhizimisi makuru chichechichechi”, marokwe mapfupi, “sezvazvaive mumazuva eSodoma, ndizvo zvazvichava mumazuva ekuuya kweMwanakomana weMunhu”, kuwanana, kurambana nekuroorazve)
ISAYA 66:4 Neni vo ndichasanangura zvinovadadira, ndichawisira pamusoro pavo izvo zvavanotya; nokuti panguva yandakadana, hakuna wakapindura, panguva yandakataura havana-kunzwa, (hatichatendi mune zvakanyorwa muBhaibheri. Saka Jesu akamira pamukova wekereke panze): asi vakaita zvakaipa pamberi pangu, vakasanangura zvakanga zvisingandifadzi (nyika yedu yanhasi nezvese zvainazvo ichaparadzwa munguva yeKutambudzika kukuru. Kereke yakatsauka ikapinda munezvenyika zvechimanjemanje, zvisingafadzi Mwari sezvo akamira kunze kwekereke)
ISAYA 66:5 Inzwai Shoko raJEHOVA, imi munodedera neshoko rake; (torai Bhaibheri zvakasimba kwete kuita zvekutamba naro). Hama dzenyu dzinokuvengai, dzakakudzingai nokuda kwezita rangu, (vakaramba rubhabhatidzo muZita raJesu Kristu) dzakati: JEHOVA ngaaratidzwe humambo hwake, kuti tione mufaro wenyu; (Iyi ndiyo nguva yekupedzisira apo Mwari anouya kuzotora vatsvene vake) asi ndidzo dzichanyadziswa (kana vasiiwa munguva yekutambudzika kukuru).
ISAYA 66:6 Inzwai mubvunzo webope riri muguta, mubvunzo unobva kutemberi, (Evhangeri rinodzokera kumaJuda kutemberi munguva yeKutambudzika) mubvunzo waJEHOVA, unoripidzira vavengi vake (Israeri ichave pasi pekurohwa munguva yeKutambudzika, nemaporofita maviri kuti aivhikirire munguva iyoyo.)
ISAYA 66:7 Wakapona asati arwadziwa; wakabereka mwanakomana kurwadziwa kwake kusati kwasvika. (Israeri yakarwadziwa kwemakore 2 000 kuti ipone Kristu seMwana aizokura ofa. Panguva iyi akaonekwa kumaJuda chete. MaJuda akadzokera mumusha mavo saka nekukasika Mesiah achadzoka zve kumaJuda)
ISAYA 66:8 Ndiyaniko wakambonzwa chinhu chakadai? Ndiyani wakambowona zvinhu zvakadai? Nyika ingaberekwa nezuva rimwe here? Rudzi rwavanhu rwungazvarwa pakarepo? (maJuda 14 4000 anozvarwa patsva) nokuti Ziyoni rakati rarwadziwa ndokubereka vana varo.
Nguva yekutambudzika kukuru ichave yakangoreba zvemakore matatu nehafu. Saka vakasara vemaJuda vanotambira Jesu saIshe nemupopesi wavo vozvarwa patsva munguva pfupi.
ISAYA 66:12 Nokuti zvanzi naJEHOVA, Tarira, ndicharitambanudzira rugare rwakaita sorwizi, nefuma yamarudzi avanhu sorwizi runofema kunze:
MaJuda anoregererwa odzoswa kuna Jesu neEvangeri rimwechete rakaponesa mahendeni.
ISAYA 66:15 Nokuti tarirai, JEHOVA uchauya nomoto, ngoro dzake dzichauya nechamupupuri; kuti aratidze kutsamwa kwake novukasha, nokutuka kwake nemurazvo yomoto.
ISAYA 66:16 Nokuti JEHOVA uchatonga nyama yose nomoto vuye nomunondo wake: vakavurawa naJEHOVA vachava vazhinji.
Mwari anodzoka mumashure menguva yeKutambudzika kuti aparadze nyika nezviri mairi paAmagedhoni.
ISAYA 66:18 Nokuti ndinoziva mabasa avo nendangariro dzavo; nguva inosvika yandichaunganidza marudzi ose namarimi ose, vachavuya vachivona kubwinya kwangu. (Amagedhoni kuungana kwemarudzi. Kuparadzwa kukuru uku kuchamisikidza kubwinya kwaMwari mumaziso meavo vanenge vapunyuka paAmagedhoni)
ISAYA 66:19 Ndichaisa chiratidzo pakati pavo, vanopukunyuka kwavari ndichavatumira (vanopunyuka kuAmagedhoni) kuna mamwe marudzi, … kuzvivi zviri kure zvisina kumbonzwa mbiri yangu, kana kuvona kubwinya kwangu pakati pamarudzi (vahedheni vasina kubvira vanzwa Evhangeri)
ISAYA 66:20 Vachavuyisa hama dzenyu dzose dzichibva kumarudzi ose chive chipo kunaJEHOVA, vakatasva mabhiza, vari mungoro, nomungoro dzinamatenga , vakatasva mahesera, namakamera, vachivuya kugomo rangu dzvene Jerusarema, (Jesu achaita Temberi itsva yenguva yeMereniyamu. Vahedheni vasina kubvira vanzwa Evangeri nevakapona munguva yekutambudzika ndipo pavanozobatira Mwari) sezvinoitwa navana vaIsraeri kana vachivuya nezvipo zvavo mumudziyo wakanaka mumba maJEHOVA, -ndizvo zvinotaura JEHOVA (maJuda akapona munguva yeKutambudzika)
ISAIAH 66:21 Ndichatora vo vamwe vavo vave vaprista navaRevhi- ndizvo zvinotaura JEHOVA. (maJuda anenge apona vachava vaprista mutemberi yemuMereniyamu itsva)
ISAYA 66:22 Nokuti denga idzva nenyika itsva, zvandichaita, sezvazvichagara zviripo, pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Mereniyamu haisi denga idzva nenyika itsva. Ichange iri “se” denga idzva nekuti Kristu ndiye Mambo uye anotonga nyika. Ndiro denga “rekutanga” , chimiro chedenga panyika.
Asi zvivi zvakaipisisa zvekuti Mwari anosiya muyeuchidzo wezvakaitiswa nezvivi kuitira kuti hakuna munhu muMereniyamu asingazivi chitadzo chevasingatendi uye vaya vakarwisa maJuda.
ISAYA 66:24 Vachabudapo, vachindotarira zvitunha zvavanhu vakandidarika:
MuMereniyamu, Mambo Jesu neMukadzi wake (kereke yechokwadi) vachatonga vatsvene, nemaJuda achatonga nyika.
Isaya anopedza nechimiro chinofadza ichi. Vatsvene vachava nemubairo wavo pamagumo.
Kuti tipedze regai titarise Isaya Chaputa 39.
Bhuku rechi 39 remuBhaibheri ndi Maraki, rinovhara Testamente Yekare.
Isaya muChaputa 39, akataura pamusoro pamambo aive akanaka Hezekia akapiwa chipo kubva kuBabironi akakoka vekuBabironi kuti vauye vaone hupfumi nezvese zvaive zvemba yake. Babironi yaive yakapfuma zvinotyisa, saka Hezekia aida kufadza Babironi, akaratidza veBabironi kuti aive akangoitawo kunge ivo nekuti aive nepfuma zhinji.
Ndiko kwakava kukanganisa kwake kukuru. Zviitiko izvi zvakaitika makore akadarika 700 BC. Asi Isaya akasarudza kuti chiitiko ichi chigure maonero ake paTestamente Yekare.
MaJuda iwayo akagurwa makore anoda kuita 120 mumashure mekunge Babironi yavatapa.
Maraki akanyora chiporofita chake kunana 400 BC. Saka Isaya akamira kwemakore anoda kusvika 300 Maraki asati asvika.
Saka Mwari ari kuedza kutidzidzisa kutii?
Kana vakarurama vakasanganiswa neBabironi (makereke emasangano) Mwari anoita mutsetse osarudza kuvagura. Asi kugurwa chaiko kunogona kuzoitika munguva dzemberi, asi kukanganisa kukuru kwakaitwa kare vakarurama vaedza kuzvifananidza neBabironi. Mumashure maizvozvo kutarirwa kuwira pasi kwavo kunosimbiswa. Kana vakarurama vakakoka Babironi kuti ipinde, runyoro rwaive pamadziro, uye vaive vakatarirwa kuwira pasi makore mazhinji aizouya.
Kana vakarurama vakadyidzana nekutadza kweBabironi, zvinomiririra chitendero chemasangano, zvinenge zvaperera ipapo. Nzira inoenda munguva Yekutambudzika kukuru inenge yasarudzwa uye nguva yeKutambudzika inotambira nemufaro mukuru maKristu akaponeswa ari mumasangano. Sangano ndiro chero misikidzo yezvechitendero inovaka kutenda kwayo panheyo dzemashoko akataurwa nemunhu, vasina kutsigira kana kufananidza mashoko iwayo neBhaibheri kuti vave nechokwadi chekuti zvinobva muMagwaro.